Waljijjiiraa Beekumsa - Project dldl/ድልድል
Waljijjiraan beekumsa fi hirmanaan hawaasa hundeeffamaa piroojektii dildiliif gahee guddaa qaba. Walgargaarsi kuni fi waljijjiran beekumsaa mala saayinsawaa (mala ammayyaa) fi amantaan gama gargaartoota ilaalcha walfakkaata kan hin qabnee fi bu’aa garagaraa jidduutti qofaa osoo hin ta’iin qo’annoo kallatti adda addaa yaadrimmee fi dhaabbilee jidduutti aadaa amantaa fi waa’ee dararra aadaa qabeessa waljijjiira beekumsa foyya’ee akka jiraatu fi hubannaan gaariin akka uumamuufi. Gareen piroojektii biyyoota sadii keessatti kan rawwaatu yoo ta’uu afaan isaanii baruun akkasuma fedhii isaanii baruun (beekun) hubannoo foyya’ee fi walgargaarsa uumuudha.
Adeemsi waljijjiirra beekumsaa hojiiwwan armaan gadii kan of keessatti qabu yoo ta’u. Waliigaltee qaama garagaraa uumuu; Webinnarii dhan ogeessota adda addaa beekumsa isaanii fi muuxannoo isaanii akka waljijjiiran gochuu; Dhaabbilee addunyaa adda addaa fi ogeessota konfiransii addunyaa guutuu qopheessun gara tokkott fiduudha. Hojiiwwan kanaan duraa hojjatamaan akka itti aanuutti dhiyaaterra.